About Us | LATHA DENTAL CLINIC
Dental Clinic in Yangon
About Latha Dental Clinic
Latha Dental Clinic ကို လသာမြို့နယ်မှာ ဆရာဝန်အစဉ်အဆက် ငါးဆက်ဖြင့် နှစ်ပေါင်း(၇၀)တိုင် ဖွင့်လှစ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လာရောက်တဲ့ လူနာတိုင်းကို မိသားစုသဖွယ် ပြုစု ဂရုစိုက်ခဲ့တာကြောင့် လာရောက်တဲ့ လူနာတိုင်းဟာ သူတို့လိုအပ်ချိန်တိုင်း “Latha Dental Clinic”ကို ထပ်မံ လာရောက်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒါဟာ လူနာနဲ့ ဆရာဝန်၊ လူနာနဲ့ ဆေးခန်းတို့ရဲ့ ယုံကြည်မှုတွေကြောင့် အခုအချိန်ထိ ရပ်တည်နေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Latha Dental Clinic မှာဆိုရင်
Braceတပ်ပြီး သွားညှိပေးခြင်း / Invisalign ဖြင့်သွားညှိပေးခြင်း
Laser ရောင်ခြည်ဖြင့် သွားဖြူအောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း
ရှေ့သွားလေးတွေ ညီညာလှပအောင် ပြုလုပ်ပေးခြင်း
သွားနှုတ်၊ သွားဖာ၊ သွားအကြောသတ်ပေးခြင်း
မေးရိုးနှင့် သွားဖုံး ပြဿနာများတို့အတွက် ကုသမှုများ ပေးနေပါတယ်နော်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့လည်း သွား နှင့်ခံတွင်း မေးရိုး၊ သွားဖုံးပြသနာများ ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်“ Dental Clinic in Yangon ”ကို လာရောက်လှည့်ပါ လို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။
Dental Implant (သွားမြစ်တုထည့်ပြီး သွားစိုက်ပေးခြင်း)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ သွားတွေရဲ့ နေရာမှာ သွားအသစ်တစ်ချောင်း ပြန်လည်စိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
တကယ်လို့သာ သင်ဟာ သွားပြန်မစိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင် ဘေးသွားတွေကျဲလာခြင်း၊ ယိုင်နဲ့လာခြင်း၊ သွားပိုးစားခြင်း၊ သွားကြားညပ်ခြင်း၊ အပေါ်သွားအောက်ကို ရှည်ထွက်လာခြင်းနဲ့ သွားဖုံးပြဿနာအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
သွားစိုက်နည်း အမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကမှ လစ်ဟာ သွားတဲ့နေရာမှာသွားတစ်ချောင်းတည်း ပြန်လည်အစားထိုး သွားစိုက်နည်းဖြစ်တဲ့ Dental Implant (သွားမြစ်တုစိုက်နည်း) အကြောင်းအနည်းငယ်ပြောပြပေးပါမယ်။ တိုင်တေနီယမ်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဝက်အူအရစ်ပုံစံ သွားအမြစ်တုကို သွားဖုံးအတွင်းသို့ တစ်ချောင်းတည်း ထည့်သွင်းစိုက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Dental Implant ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့
✔️တိုင်တေနီယမ် Implant ထည့်သွင်းရမှာဖြစ်လို့ သွားဖုံးအောက်ရှိ မေးရိုးကို အသေးစားခွဲစိတ်မှုလေးလုပ်ရပါမယ်
✔️သဘာ၀ သွားအရောင်အတိုင်း ရွေးချယ်စိုက်လို့ရပါမယ်
✔️ဒါ့ကြောင့်ဈေးကတော့ တစ်ခြားသွားစိုက်နည်းတွေထက် အနည်းငယ်မြင့်ပါတယ်
✔️ဆရာဝန်ရက်ချိန်းအတိုင်း ပြန်လည်ပြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
Latha Dental Clinic မှာသွားစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ကုသမှု တစ်စုံတစ်ရာပြဿနာမဖြစ်ရလေအောင် အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် အသေးစိတ်စစ်ဆေးကုသပေးနေပါတယ် ။
Invisalign (Invisalign ဖြင့်သွားညှိပေးခြင်း)
လူကြားထဲ သွားပေါ်အောင်ပြုံးနိုင်ဖို့ သင့်သွားတွေဟာ မညီညာ ၊ ကျဲနေတာ ၊ သွားတွေထပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်လို့ စိတ်မသက်မသာဖြစ်နေရပါသလား? Invisalign လို့ခေါ်တဲ့ အကြည်ရောင်သွားစွပ်လေးဖြင့် သက်တောင့်သက်သာ သွားညှိလို့ရနေပါပြီ .. Invisalign ရဲ့ သာလွန်တဲ့အချက်တွေကတော့. . .
✅တစ်ခြားသွားညှိတဲ့ပုံစံတွေလို Bracket တပ်နေစရာမလိုပဲ အကြည်ရောင်အစွပ်လေးကိုလွယ်လွယ် ကူကူ တပ်ဆင်နိုင်တာကြောင့် သွားညှိထားခြင်းကို သိသိသာသာ မပေါ်လွင်စေပါဘူး။
✅အစားစားချိန် သွားတိုက်ချိန်တွေမှာ အစွပ်ကို အလွယ်တကူ ခဏဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်။
✅ခေတ်မှီနည်းစနစ်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် ကုသမှုအပိုင်းကို အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လို သွားပိုင်ရှင်မျိုးတွေ အများဆုံးပြုလုပ်ကြသလဲ ?
✔️အပေါ်မေးရိုးနှင့် အောက်မေးရိုး မညီတဲ့သူ
✔️အပေါ်သွားနှင့် အောက်သွား ဟနေတဲ့သူတွေ Invisalign ကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။
Latha Dental Clinic မှာ Invisalign ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တပ်ထားချိန် ၂နှစ်ခွဲ ကြာမြင့်မှာပါ ။ ကုသမှုအစမှာတော့ သင့်ရဲ့သွားနေရာ ရွေ့မှာဖြစ်လို့ အနည်းငယ် နာကျင်မှုမျိုးသာဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုသုံးပြီး ကုသပေးတာကြောင့် တစ်စုံတစ်ရာထိခိုက်တာမျိုးမဖြစ်စေရအောင်ကျွမ်းကျင်သည့် ဆရာဝန်ကြီးတွေကသာ ကုသမှုပြုလုပ်ပေးမှာပါ ။ သွားအရမ်းထပ်ပြီး ညှိဖို့နေရာ လွတ်မရှိတဲ့အခါမျိုးမှာသာ သွားနှုတ်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ် ။ ဆရာဝန်ရက်ချိန်းအတိုင်း မပျက်မကွက်ပြသဖို့လိုပါတယ် ။